नेपालमा ५ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणको आशंकामा- पाँचै जना अस्पताल भर्ना – BANKE POST
Posted on March 4, 2020 March 4, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
२१ फाल्गुन, काठमाडौं । नेपालमा ५ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणको आशंकामा अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि उनीहरु टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग उपचार केन्द्रमा पुगेर भर्ना भएको हुन् ।
मिल्दो लक्षण देखिए पनि उनीहरुलाई कोरोनाभाइरसकै संक्रमण भएको हो वा अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या हो भन्ने पुष्टि हुन बाँकी छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणँग मिल्दाजुल्दा लक्षणसहित सोमबार बिहानसम्म पाँच व्यक्ति भर्ना भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग केन्द्रमा निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले जानकारी दिए । चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका उनीहरूमा ज्वरो र रुघाखोकीजस्ता लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल आएको डा. पाण्डेले जानकारी दिए । उनीहरू शंकास्पद बिरामीको मापदण्डमा परेकाले निगरानीमा राखिएको पाण्डेले बताए । यसरी भर्ना हुनेहरुमध्ये ४ जना नेपाली र १ जना चिनियाँ नागरिक हुन् ।
डा. पाण्डेका अनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरस चीन, इरान, इटली लगायतका बढी प्रभावित देशमा जस्तो गरी नेपालमा फैलिएको छैन । नेपालमा झन्डै सात हप्ताअघि एक व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो । तर त्यसपछि अरू कसैमा पनि संक्रमण देखिएको छैन । ती संक्रमित व्यक्ति पनि आफैं अस्पताल पुगेका थिए । चीनबाट फर्किएका उनी अस्पताल पुग्नुभन्दा अगाडि धेरै व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका भए पनि उनीबाट अरुमा सरेको नपाइएकोले नेपालमा यो भाइरस प्रवेश गरिहाले पनि यसको फैलिने क्रम अन्य देशमा जस्तो तीव्र नहुने संकेत देखिएको छ ।
नेपालमा तीव्र गतिमा भाइरस नफैलिएको देखिए पनि यसलाई बेवास्ता नगर्न डा. पाण्डेले सुझाव दिए । उनले कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि समाजिक क्रियाकलापबाट आफूलाई अलग राख्न र घरमा पनि एक्लै बस्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।
के अमेरिकाले वास्तवमा चीनको उदयलाई समेट्न सक्छ?
Posted on July 24, 2020 July 24, 2020 Author Hari Adhikari
अधिकांश चिनियाँ विद्वानहरूका नजरमा विगतमा अमेरिकाले अमेरिका र सोभियत संघ बीच शीतयुद्ध सुरू गर्न सफल भए पनि वर्तमान समयमा अमेरिकालाई चीन र अमेरिका बीचको शीतयुद्धमा भने गाह्रो हुने निश्चितप्रायः छ। यद्यपि ९० प्रतिशत चीनीयाँ विद्वानहरूले चीनको बिरूद्ध अमेरिकाको नयाँ शीतयुद्ध राम्रोसँग सामना गर्न सक्ने कुरामा विश्वास गरेका छन। केवल ६ प्रतिशत विद्वानहरू निराशावादी छन्। चीन […]
Posted on May 12, 2020 May 12, 2020 Author Hari Adhikari
बाँके ,बैशाख ३० – नेपालमा मंगलबार राती थप २६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पछि आज मात्र संक्रमीत हुनेको संख्या ८३ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितको संख्या २ सय १७ पुगेको छ।मंगलबार दिउसो ५७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो। साँझ थपिएका २६ जनासहित एकैदिन ८३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो।काठमाडौं, भक्तपुर सहितको […]
Posted on April 9, 2021 April 9, 2021 Author Hari Adhikari
नेपालगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको अध्यक्ष दामोदर भण्डारीको प्यानल बिजयी भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औं महाधिवेशन अन्तर्गत बुधबार भएको निर्वाचनको शुक्रबार बिहान आएको मतपरिणाम अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवसायिक श्रमजीवी पत्रकारको संयुक्त प्यानलबाट अध्यक्षमा उठनुभएका दामोदर भण्डारीसहितको प्यानल बिजयी भएको हो । भण्डारीले निकटम प्रतिद्धन्दी साझा प्यानलका उम्मेदवार डक्ट प्रसाद धिताललाई १८ […]